vaomiera fampianarana teny malagasy
Fandraisana Ny vaomiera Fiampianarana Teny Malagasy (VFTM)
VAOMIERA Fampianarana Teny Malagasy (VFTM) :
Ity no lien mankao amin ny vaovao vftm :
Sabotsy 26 jona 2021 :
Fomba hidirana amin'izany :
ID : 82533050925
Alahady 23 may 2021 :
Fandraisan'anjaran'ny VFTM ao amin'ny gazety Ny Mpiaradia Pentekosta 2021.
Ny sabotsy 27 febroary dia hanao atrik’asa momba ny SORAKALIANA ny Vaomiera Fampianarana Teny Malagasy.
Manomboka amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 3 ora sy sasany ny fotoana ato am-piangonana.
Ho araraotina izany fotoana izany ampahafantarina amintsika ny fiavian’ny Soratra tao Madagasikara, indrindra ny Sorabe.
Ny angano mitondra ny lohateny hoe DARAFIFY ohatra dia voasoratra tamin’ny Sorabe.
Manasa antsika mpianakavin’ny finoana hanatrika izany fotoana izany.
Noho ny toe-javatra ara-pahasalamana anefa dia tianay ny hisoratanareo anarana mialoha, hatramin'ny alakamisy alohan’ny fotoana.
Misaotra antsika mba hitrotro am-bavaka ny fotoana rehetra.
Alahady 31 aogositra 2020 :
Manomboka ny sabotsy 12 septambra ny fampianarana ny teny malagasy.
Amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 3 ora sy sasany eto amin'ny Temple du Hâ.
Misokatra ho an’ireo izay mbola sahirana amin’ny fitenenana ny teny Malagasy ny VFTM koa manasa antsika hitondra sy hamporisika ny ankizy sy ny tanora. Ny lehibe moa afaka mandalina rahateo.
Manarak’izany noho ny faha 5 taonan’ny nitsanganan’ny VFTM teto Bordeaux amin’ny taona 2021 dia hanao fifaninanana LOGO ny vaomiera.
Raisinay mpiandraikitra sy mpampianatra dieny ka hatramin’ny faran’ny volana novambra 2020 izao ny anaran’ireo izay te handray anjara.
Ny toromarika dia omena izay misoratra anarana.
Voninahitra anie ho an’Andriamanitra.
Alahady 5 jolay 2020 :
Misaotra antsika fiangonana tamin’ny fiaraha-miasa nahatontosa iny horonan-tsary VFTM iny.
Misaotra an’Andriamanitra lehibe nanafy hery antsika ary nahatanteraka ihany koa.
Manantena ny fitohizan’izany fiaraha-miasa izany amin’ny loabary an-dasy momba « ny fanahy no maha olona ».
Ho lazaina amintsika manaraka ny fotoana.
Manonona ny fiadanan’ny Tompo aminareo tsirairay avy.
Sabotsy 4 jolay 2020 :
Alahady 21 jona 2020 :
Miarahaba antsika rehetra amin’ny alalan’ity lahatsotra ifampizarana ity.
Izahay VTFM dia nikasa hamarana ny taom-pianarana 2020 amin'ny seho an-tsehatra. Noho izany dia nanapa-kevitra izahay fa hanolotra seho amin’ny alalan’ny horona-ntsary mba tsy ho banga ny fianarana teny Malagasy 2020 . Hizara roa ny ho arahantsika ao anatin'izany :
- ny tapany voalohany dia ahitantsika ny seho nataon’ny VTFM tamin’ny taona nifandimby teo aloha ;
- ny tapany faharoa kosa dia seho izay nokasaina hotanterahana an-tsehatra amin’ny famaranana ny taona.
Ny loabary an-dasy mitondra ny lohateny hoe "Ny fanahy no maha olona" izay noheverina hatao amin'io andro io dia ahemotra amin'ny daty manaraka.
Mbola zaza vao izahay ka miangavy antsika hanome soso-kevitra sy hanampy anay amin’izay mbola kasainay ho tanterahina eo amin’ny lafiny fampianarana teny malagasy.
.Misaotra sahady izahay amin’ny fanoloran-tanana.
Alahady 29 desambra 2019 :
Miarahaba antsika amin’ny anaran’ny Tompo ny VFTM,
Ny fampianarana teny malagasy manaraka dia ny sabotsy faha 18/01/20 manomboka amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 3 ora sy sasany ato amin’ny Temple du Hâ.
Manasa ny ray ama-dreny hanatrika ny fivoriana aorian’ny fampianarana hilazana ny hetsika VFTM manaraka.
Ny Tompo anie hitahy.
Zoma 25 oktobra 2019 :
Alahady 1 septambra 2019 :
Miarahaba ny fiangonana amin'ny anaran'ny Tompo.
Izao ny lohahevitra entin'ny Vaomiera Fampianarana ny Teny Malagasy mandritra ity taom-pianarana vaovao ity :
"Mametraka andraikitra amintsika ny Tompo ary mahomby isika miaraka Aminy."
Manainga ny sampana rehetra sy ny fiangonana ny vaomiera hiezaka amin'ny fanazarana ny ankizy sy ny tanora amin'ny fitenenana ny teny malagasy.
Manomboka ihany koa ny fampianarana amin'ny asabotsy faha 14 ny volana septambra ho avy izao eto amin'ny temple du Ha, salle 2.
Manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 3 ora sy sasany.
Iangaviana ny mpianatra hitondra ny kahie sy ny fitaovam-panoratana miaraka amin'ny Baiboly teny frantsay sy teny malagasy.
Misokatra ho an'ny rehetra izao fampianarana izao fa tsara milaza mialoha ihany aty amin'ny tompon'andraikitra na amin'ny diakona izay vonona hanaraka izany ho amin'ny fandaminana.
Misy fivoriana ho an'ny ray aman-drenin'ny ankizy sy ny mpianatra tanora sy olon-dehibe amin'io andro io aorian'ny fampianarana (3o sy sasany-4o).
Misaotra amin'ny fiaraha-miasa.
Ny Tenin'Andriamanitra (nindramina amin'ny SLK koa) dia ny hoe :
"Amboary ny lalan'i Jehovah. Ataovy mahitsy ny lalan-kalehany" Marka 1.3b
Miarahaba ny mpianakavin’ny finoana ao amin’ny Tompo,
Lohahevitra FLH 26/07 :
"Les chrétiens face aux fomban-drazana"
Maro ireo fomban-drazana, ary maro amintsika no manontany tena mikasika ny famadihana, na ny fivavahana amin'ny razana, ireo fady isan-karazana….
Ahoana no tokony ataontsika kristiana manoloana izany ?
Tongava maro ary ry havana fa manan-kambara amintsika ny Tompo.
Manome fotoana anao hanatrika ny FLH farany amin'ity taom-pianarana ity, izay hatao ny zoma 26 jolay 2019 manomboka amin'ny 8 ora alina ato amin'ny Temple du Hâ, iarahantsika amin’I Pasitera Fafà.
Voninahitra ho an’Andriamanitra irery ihany ary ho amintsika kosa ny fiadanaNy.
Mampiomana antsika mpianatra sy ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra ato amin'ny VFTM sahady, fa amin'ny sabotsy 14 septambra 2019 ny fampianarana ny teny malagasy manaraka.
Misaotra mialoha antsika amin’ny fiaraha-mientana.
Miarahaba ny mpianakavin’ny finoana ao amin’ny Tompo nahatratra izao andro pentekosta izao.
Raha nijery mikasika ny hoe "mety ho very ve ny finoana ?” isika tamin’ny FLH farany, dia maro no nahatsapa fa sarotra ny manaraka ny Tompo sy mitazona ny finoana noho ireo zava-mitranga maro samihafa misy eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny fiainantsika an-davan'andro toa ny aretina, fahoriana, fitsapàna ... na fifaliana be loatra koa aza…Soa ihany fa Izy Tompo mihintsy no mitady sy mihazona antsika, ka “na manana finoana kely toa ny voatsinampy tokoa aza isika dia ahafindra tendrombohitra” hoy ny tenin’Andriamanitra.
Amin’ny fomba manao ahoana no ahafahantsika mitombo ao amin’I Kristy izany, satria izany indrindra no tian’Andriamanitra ho antsika n’inona n’inona lalovantsika, dia ny ahatonga antsika rehetra, « ho lehilahy sy vehivavy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ ny fahafenoan’ i Kristy; mba tsy ho zaza intsony isika…fa mba hanaraka ny marina amin’ ny fitiavana ka hitombo amin’ ny zavatra rehetra ho amin’ Izay Loha, dia Kristy ... "
Noho izany dia faly manasa antsika ho tonga maro hanatrika ny FLH manaraka ary manome fotoana antsika ny zoma 21 jona 2019 manomboka amin'ny 8 ora alina ato amin'ny Temple du Hâ fa manan-kambara amintsika ny Tompo.
Izany dia haompana amin'ny lohahevitra hoe : "Mitombo ao amin'i Kristy" na "Grandir en Christ" ary iarahantsika amin’I Pasitera Fafà.
Ny Fanahy Masina anie hialoha lalana antsika sahady.
Vaovao VFF :
Lohahevitra FLH 26 aprily 2019 : "Peut on perdre la foi ?", “Mety ho very ve ny finoana ?”
Maro amintsika no manontany tena hoe mbola manana finoana ve aho ?
Mangataka mafy amin'Andriamanitra ny ihazonaNy antsika satria mahatsapa isika fa mangozohozo ny finoantsika.
Iarahantsika mahalala fa misy fotoana tena mafy be ny manaraka ny Tompo. Mafy loatra manko ireo zava-mitranga maro samihafa misy eo amin'ny fiangonana, ... , eo amin'ny fiainantsika an-davan'andro (aretina, fahoriana, fitsapàna ... na fifaliana be loatra koa aza e ...) ary maro amintsika na ireo olona manodidina antsika, no manontany tena hoe : "tsy haiko raha mbola manana finoana aho !" Indrisy...
Mety ho very tokoa ve ny finoana ananantsika ?
Tongava maro ry havana fa manan-kambara amintsika ny Tompo.
Manome fotoana anao ary hanatrika ny FLH izay hatao ny zoma 26 aprily manomboka amin'ny 8 ora alina ato amin'ny temple du Hâ, iarahantsika amin’ny pasitera Fafà sy ny mpiara-miasa aminy Fanantenana.
Alahady 31 martsa 2019 : vaovao VFTM
"Mifalia mandrakariva ao amin’ny Tompo, hoy izaho indray : Mifalia.” Filip 4.4
Faly miarahaba ny ray aman-dreny sy ny mpianatra teny malagasy ao amin’ny Tompo,
Toy ny fanaontsika isan-taona dia amin’ny sabotsy 06 aprily no hanao ny fitsangatsanganana arahana kilalao malagasy isika miaraka amin’ny STK .
Ny toerana : Parc Bordelais, rue du Bocage, 33000 Bordeaux.
Ora fahatongavana : 9 ora sy sasany maraina
Firavàna : 3 ora tolakandro
Ny zavatra entina : pic nique sakafo atoandro.
Vato kely anaovana ara-dimy, pala ho an’izay afaka mitondra ary akanjo mifanaraka amin’ny toetr’andro.
Manantena antsika ray aman-dreny hitondra maro ny zanantsika.
Alahady 17 martsa 2019 : vaovao VFF
Na ankizy ianao na tanora, na efa manambady na tsia, na efa manan-janaka na tsia,
Dia asaina ho tonga hanatrika ny FLH manaraka, izay hatao ny zoma 29 martsa 2019 manomboka amin’ny 8 ora hatramin’ny 9 ora sy sasany alina ao amin’ny Temple du Hâ, salle 1, fa ho anao, ho ahy, ho antsika rehetra ny lohahevitra ho dinihina amin'izany, izay iarahantsika amin’ny Pasitera Fafa sy ny mpiara-miasa aminy Fanantenana.
Izany dia mikasika indrindra ny “ NY FIANAKAVIANA KRISTIANA “.
Un jour, un père de famille a dit : "aucune famille chrétienne ne peut se vanter d'être un parfait modèle de piété ou d'engagement".
Nous admettons tous l'existence d'un fossé entre l'idéal d'une vie de famille engagée en Christ et la réalité d'une vie de famille.
Quand Josué a dit : "Moi et ma famille, nous servirons l'Eternel", il semblerait que notre choix est primordial pour déterminer l'authenticité de notre démarche et cheminement avec le Seigneur.
Venons tous ensemble réfléchir sur la famille chrétienne à l'instar de Josué, le précurseur d'une démarche sincère et déterminée en Dieu.
Venons tous, tels que nous sommes, avec nos convictions et nos hésitations, avec notre famille, nos amis, nous tous qui formons une grande famille en Christ,au FLH du vendredi 29 mars 2019, à partir de 20h, qui aura pour thème : "La Famille Chrétienne ou la Famille en Christ".
Alahady 17 martsa 2019 : vaovao VFTM
Amin'ny sabotsy 30 martsa 2019 ny fampianarana ny teny malagasy manaraka, izay atao any amin'ny SILOE, eo akaikin’ny Temple EPUF, 283 rue Frédéric Sévène, 33400 Talence, manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora sy sasany tolakandro toy ny mahazatra.
Misaotra mandrakariva ny ray aman-dreny miezaka mitondra ireo zanantsika na dia niova aza ny toerana.
Alahady 17 febroary 2019 :
“Mifalia mandrakariva ao amin’ny Tompo, hoy izaho indray mifalia” Filip 4/4
Isaorantsika ny Tompo fa noho ny fahasoavaNy dia tanteraka soa aman-tsara omaly sabotsy 16 febroary ny fiarahantsika mifaly tamin’ny alalan’ny atrik’asa mozika izay nokarakaraina niaraka tamin’ny Sampana Antoko Mpihira.
Misaotra indrindra ny fianakaviana John sy Maherizo ary Henika FASINA nandray antsika tam-pitiavana.
Misaotra ny Sampana Antoko Mpihira, misaotra ireo mpampianatra sy ny mpianatra ary ny ray aman-dreny tamin’ny fiaraha-mientana. Tsapa tokoa fa tamin'ny fo feno fifaliana no nandraisantsika rehetra anjara tamin’izany.
Asaina isika amin'ny atrikasa "mozika" karakarain ny VFTM sy ny sampana Antoko Mpihira amin'ny asabotsy 16 febroary 2019 manomboka amin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny 3 ora sy sasany any an-tokantranon'i Maherizo sy John, tél 07 68 90 25 47, adiresy ho an'ny GPS : 235 avenue de la libération - 33110 Le Bouscat.
Nous sommes tous invités à l'atelier "musique" organisé par la VFTM et la Chorale le samedi 16 février 2019 chez Maherizo et John, tél 07 68 90 25 47, adresse du voisin pour le GPS (ne pas sonner) : 235 avenue de la libération - 33110 Le Bouscat de 14h à 15h30.
Que ceux qui ont du talent partagent à ceux qui en ont moins.
En fin de séance nous partagerons un goûter tiré du sac.
Vaomiera Fiofanana sy Fanabeazana
Faly miarahaba ny mpianakavin’ny finoana ao amin’ny Tompo,
Manasa antsika hanatrika ny FLH manaraka izay iarahantsika amin’I Pasitera Fafà, izany dia hatao amin’ny zomà 23/11 manomboka amin’ny 8 ora alina ka hatramin’ny 9ora sy sasany alina ao amin’ny salle 1.
Ny lohahevitra hodinihana amin’izany dia ao amin’ny Filipiana 3.7-11 :
"Nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'i Kristy. 8 Eny tokoa, fa ataoko ho fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fihoaran'ny hatsaran'ny fahalalana an'i Kristy Jesosy Tompoko, Izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko ho taimboraka ireny mba hahazoako an'i Kristy; 9 ary mba ho hita ao Aminy aho tsy manana ny fahamarinako, izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoana an'i Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana; 10eny, mba ho fantatro Izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka hampitovina amin'ny endriky ny fahafatesany, 11 raha mba misy hahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty."
Dia manantena hatrany ny fahatongavantsika maro hatrany.
An’Andriamanitra irery ny voninahitra.
Vaomiera fampianarana ny teny malagasy:
Amin'ny asabotsy 24 novambra indray ny fampianarana teny malagasy manaraka, izay eto amin'ny temple du Hâ manomboka amin'ny 2 ora ka atramin'ny 4 ora tolakandro toa ny mahazatra.
Mampahatsiahy mandrakariva fa misokatra ho an’ny rehetra ny fianarana ny teny Malagasy ka raha liana ianao, na mila fanazavàna bebe kokoa mikasika an’izany, dia aza misalasala manatona anay.
Mbola misaotra ny Ray aman-dreny miezaka mitondra ireo zanatsika ara-potoana.
Vaomiera ny fihofanana sy fanabeazana :
Fandinihana lohahevitra 22/06 manomboka amin’ny 8ora ka hatramin’ny 9ora sy sasany alina ao amin’ny Salle 1.
Lohahevitra : Matio 5.1-12 na ny toriteny nataon i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra :
“…Sambatra ny malahelo am-panahy….Mifalia sy miravoravoa ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra…”
Manentana ihany koa antsika mpiara-mivavaka hanomana, ary ho tonga maro hiaraka hisaintsaina sy handinika ny amin’izay tena tian’ny Tompo ambara amintsika amin’ny alalan’izany teniNy izany.
Ho amintsika anie ny fiadanan’ny Tompo.
Vaomieran’ny fampianarana ny teny Malagasy:
Faly miarahaba antsika @ anaran'ny Tompo.
« Sambatra izay fidinao ka ampanatoninao hitoetra eo an-kianjanao; Te-ho voky ny zava-tsoa ao amin'ny tranonao izahay dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao. » Salamo 65.4
Noho ny fahasoavan’Andriamanitra ary isaorantsika Azy, fa tanteraka soamantsara ny fitsangatsanganana arahana lalao niarahana tamin’ny STK omaly Sabotsy 09 jona tany @ Parc Palmer , Cenon ,
Misaotra indrindra ny Stk, izay hita fa nazoto be, ka nandray anjara mavitrika tamin ny fanomanana ny kilalao, no sady nandray anjara tamin’ny fotoana rehetra. Misaotra koa ireo mpiara-miasa sy ireo mpandray anjara tonga tamin’izany fa feno fifaliana sy fifankatiavana tokoa ny fotoana rehetra nifampizarantsika.
FAMPIRANTIANA 23/06 :
Ny fihaonantsika manaraka dia ny fampirantiana izay hatao amin’ny 23/06 manomboka amin’ny 3 ora tolakandro, ao amin’ny Hâ 32.
Ny fahatongavana ho antsika manao installation dia amin’ny 2ora tolakandro.
Hisy vina, lalao, tsianjery ary dihy hatolotr’ireo mpianatra teny Malagasy amin’izany.
Hisy goûter koa hifampizarantsika, koa iangaviana isika samy hitondra kely izay zaka.
Manasa antsika , ary manentana sy manantena antsika mpiara-mivavaka rehetra ho avy maro hanotrona anay ho fampaherezana sy fanohanana anay.